Imbali Yembali YaseRoma
Iincwadi kwiRome lasendulo ukusuka kwiSiseko ngoBukhosi ukuwa
Nazi iziphakamiso zokufunda malunga neRoma yasekuqaleni, ukususela ekusekeni kwayo, ngookumkani, kwiRiphablikhi kunye noBukhosi, ukuwa kweRoma. Ezinye iincwadi zifanelekile kubantwana besikolo, kodwa uninzi lwabantu abadala. Uninzi lukhupha ixesha elithile, nangona kukho ezinye eziqhelekileyo. Zonke ezi zicetyiswayo. Khangela inkcazo kunokuba ubale. Unokunqwenela ukuba uqaphele ukuba ezinye zezi ngcebiso ziyi-classical kwintsimi kwaye ziye zadlulayo iminyaka emashumi. Unokufumana isitayela sabo sokubhala esingaphantsi kokubhala kunabalobi banamhlanje.
Ndihlala ndiKesare. PriceGrabber
I-Tatum inento ethile kuYulius Caesar kuwo wonke umntu, ukusuka ekuhlaziyeni kwindlela yentlalo kunye nezopolitiko zaseRiphabliki yaseRomania, ekuhlaleni okutsha ngokubaluleka kwegama likaKesari elidumoyo elifa, ukuthelekisa phakathi kukaKhesare kunye nabaholi bexesha elibonakalayo. Ekubeni izinto eziphathekayo zithathwe kwiintetho zomphakathi, iprosethi ihamba njengaleyo yokubandakanya uprofesa wanamhlanje okanye umlandisi weendaba. (2008)
Iziqalo zaseRoma, nguTim Cornell
Iziqalo zaseRoma, nguTim Cornell. PriceGrabber
I-Cornell igubungela iRoma ukusuka ku-753 BC ukuya kwi-264 BC ngokubanzi kwaye ukususela ekupheleni kwe-20 leminyaka, i-up-to-date. Ndiyisebenzise ngokubanzi, ngakumbi xa ndijonga ukwanda kweRoma, nangona andizange ndiyihlolisise. Kuphela kubalulekile kwithuba. (1995)
UKesare Ubomi beColossus, ngu-Adrian Goldsworthy
U-Adrian Goldsworthy Caesar - Ubomi beColossus. PriceGrabber
I-Adrian Goldsworthy Caesar - Ubomi beColossus yinto ede, ecacileyo, efundwayo yeJulius Caesar ebhaliwe ngumlando-mlando wezempi oquka iinkcukacha ezininzi ngamaxesha kunye namasiko aseRephablikhi yasekupheleni. Ukuba awunamdla ngokuqhelana noJulius Caesar, iGostsworthy ikunikezela ngeziganeko zobomi bakhe obumnandi. Ukuba uyazi, iingqungquthela zeGoldsworthy ezikhethiweyo ekubhaleni ubomi bukaKesari zenza ibali elitsha. (2008)
Usuku lwabaBharba, ngo-Alessandro Barbero
Usuku lwabaBharba. PriceGrabber
Kwabo abangewona iingcaphephe abafuna ukubukeka ngokucacileyo kwimvelaphi kunye neziganeko ezibonakalayo kwi-Battle of Adrianople okanye ukuxhatshazwa koBukumkani baseRoma, okanye abo bafuna ukubaluleka kwimbali yamaRoma nguMbuso waseRashiya, Usuku lwabaBarbara: Imfazwe eyalandela ukuwa koBukumkani baseRoma , ngo-Alessandro Barbero, kufuneka ibe kwiluhlu olufutshane lokufunda. (IsiNgesi: 2008)
Ukuwa koBukumkani baseRoma, nguPeter Heather
Ukuwa koBukumkani baseRoma, nguPeter Heather. PriceGrabber
Ukuba ukhangele iincwadi eziphambili, ngokusisisiseko sokuwa kweRoma ukusuka kwindlela yanamhlanje, u-Peter Heather Ukuwa kobukumkani baseRoma kuya kuba yinto enhle. Inayo i-ajenda yayo, kodwa kunjalo nobuKristu-kugxininisekile (Gibbon) kunye nezoqoqosho (AHM Jones) zisebenza ngokuwa kweRoma. (2005)
Ukusuka kwiGracchi ukuya eNero, ngoHH Scullard
Scullard - Ukusuka kwiGracchi ukuya eNero. PriceGrabber
Ukusuka kwi-Gracchi ukuya eNero: Imbali yaseRoma ukusuka ngo-133 BC ukuya kwi-AD 68 ngumbhalo oqhelekileyo ngexesha le-Revolution yamaRoma nge-Julio-Claudian. I-Scullard ibheka iGracchi, iMarius, iPompey, iSulla, uKesare kunye nobukhosi obandayo. (1959)
Imbali yehlabathi lamaRoma 753 ukuya ku-146 BC, nguHH Scullard
Scullard - Imbali yehlabathi lamaRoma. PriceGrabber
Kwimbali yehlabathi lamaRoma 753 ukuya ku-146 BC , uHH Scullard ubheka iziganeko eziphambili kwimbali yaseRoma ukususela ekuqaleni kweRiphablikhi ngokusebenzisa iMigodi yePunic. Kwakhona izahluko ngobomi baseRoma kunye nenkcubeko. (1935)
Isizukulwana sokugqibela samaRoma, ngo-Erich Gruen
Isizukulwana sokugqibela seRiphabhliki yaseRoma, ngo-Erich S. Gruen. PriceGrabber
U-Erich S. Gruen, obhala malunga neminyaka engamashumi amathathu kamva kukaSir Ronald Syme, unikezela ngokuchazwa ngokuphambanise ngokukhawuleza kwezinto zexesha. (1974)
Kanye emva kweTiber, nguRose Williams
Kanye emva kweTiber, nguRose Williams. PriceGrabber
U-Rose Williams wabhala okhohlakeleyo Emva kweTiber kunye nabaphulaphuli abathile engqondweni: abafundi abafunda isiLatini abafuna imvelaphi kwimbali yamaRoma. Kwingqondo yam, kuyafaneleka ukuba abafundi bafunde ngembali yaseRoma, ngokukodwa njengencediso kumxholo wolwazi olulinganiselwe-ekuguquleleni okanye kwiincwadi zezifundo. Esikhundleni sokuxelela kuphela loo mbali njengokuba kunokuqinisekiswa ngokuchanekileyo ngokomlando, uRose Williams ubonisa oko amaRoma abhala ngabo. (2002)
Political Party kwixesha likaKhesare, nguLily Ross Taylor
Political Party kwixesha likaKhesare, nguLily Ross Taylor. PriceGrabber
Enye iklasi, ukususela ngo-1949, ngeli xesha nguLily Ross Taylor (1896-1969). "I-Political Party" ibonisa ukuba ezopolitiko zahlukile kwiCicero kunye nosuku lukaKhesari, nangona iindawo eziphambili kwaye zidlalwa ngokuqhelekileyo zixutywa ngamaqela alondolozo kunye noluntu. Abaphathiswa babekho abaxhasi ukuze "baphume ivoti." (1949)
Ukuguqulwa kwamaRoma, ngoRonald Syme
I-Syme's Revolution yamaRoma. PriceGrabber
Iminyaka ka-1939 uSir Ronald Syme wayesecacisa malunga nexesha ukususela ngo-60 BC ukuya ku-AD 14, ukugqitywa kukaAgasto, kunye nokunyanzelisa ukunyuswa kwidemokhrasi ukuya kutshutshiso. (1939)
Imfazwe yamaRoma, ngo-Adrian Goldsworthy
Imfazwe yamaRoma, ngo-Adrian Goldsworthy. PriceGrabber
I-Adrian Goldsworthy ye- Warfare Warfare isingeniso esihle kwiindlela amaRoma awasebenzisa ngayo amajoni abo ukuba abe ngumbuso wehlabathi. Ikwabandakanya ubuchule kunye nentlangano yeenqwelo. (2005)
Imbali yamandulo yamaRoma: i-Salutatio
Ukuphendula Inkcazo kwiKhemistry
I-Hoedads: Isixhobo kunye noBambiswano
Iingoma ezi-10 eziphambili ze-Pop Pop Meyi 6, 2014
ImiSebenzi yeeNgesi zamaJamani
Ukuqonda nokuFunda kwangaphambili